HTCManía Launcher, Codsiga Android ee loogu talagalay htcmaniacs | Androidsis
Bogga tixraaca ee Isbaanishka ku saabsan boosteejada Htc, Htcmania, wuxuu abuuray a Codsiga Android Taas oo noo oggolaaneysa inaan helno marin toos ah oo boggaaga ah iyadoon loo fureyn biraawsarka iyo helitaanka waxyaabaha la jecel yahay ama la qorayo cinwaanka bogga la yiri.
Barnaamijkan waxaa abuuray Vierco, Maamulaha golayaasha htcmanía iyo qof qurux badan, wuxuu noo ogolaanayaa mar la soo dejiyo oo laga soo rakibo Suuqa Android Ku dhejinta iyada oo ah widget kumbuyuutarkeena oo leh hal saxaafad oo marin u ah bogga ugu weyn ee webka, waxay sidoo kale ku daraysaa mashiin raadin oo u oggolaanaya baaritaanka tooska ah ee bogga iyo ugu dambeyntii marin toos ah sidoo kale kanaalka Twitter si loo raaco waqtigeeda.
Codsi fududeyn doona marin u helka kumanaanka isticmaale ee boggan. Waxaa jira laba nooc, mid ka mid ah kuwa haysta a terminal leh Android 1.5 iyo mid kale oo heysta noocyada sare ee Android.
Hadda waxaan u sameyn doonnaa soo-jeedin Vierco waana inuu abuuro codsi dhammaystiran oo Android ah oo loogu talagalay daalacashada boggiisa, taas oo aan runtii u mahadcelin doonno dhammaantood, Vierco, miyaad qaadeysaa galoofyada? 😉
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka 'KMK' ee 'HTCMania cupcake' app
Faahfaahin dheeri ah oo kusaabsan barnaamijka HTCMania android
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » HTCManía Launcher, codsiga Android ee loogu talagalay htcmaniacs
Aad baad u naxariis badan tahay 🙂
Waad ku mahadsantahay dareenkaaga ... oo waxaan arkaa gacmo gashi, waan arkaa hehehe 😉
Ku jawaab Vierco
Waxaan ku haystay android-kayga muddo dheer, hehe lama huraan.